Usersfọdụ ọrụ na-akọ nsogbu na USB ekweisi mgbe emelite ka MacOS 10.12.4 | Esi m mac
Usersfọdụ ọrụ na-akọ nsogbu na USB ekweisi mgbe emelite ka MacOS 10.12.4
Dịka m si Mac gwa gị, Mọnde gara aga, Apple nyere ndị ọrụ ya nke ikpeazụ nke MacOS 10.12.4. Imirikiti ndị mmepe nwalere mmelite ahụ, dị ka oge a ọnụ ọgụgụ nke betas abụwo ihe dị mkpa. A awa ole na ole gara aga, anyị maara dịtụ ukwuu Mkpesa sitere n'aka ndị ọrụ ekweisi ejikọtara na Mac site na USB. AO yiri ka, mgbe emesịrị, a na-akpọ ụda na-adịghị mma. Ngwa ngwa ọtụtụ ndị ọrụ dere na forums nke Apple oru nkwado, na-achọ ihe ngwọta dịnụ nye nsogbu ha Akụkọ a agbasawo gaa na mgbasa ozi dị iche iche ngwa ngwa.
Dị ka ihe ndị dị na forums a kọwara na mbụ, glitch adịghị ka a metụtara otu Mac nlereanya ma ọ bụ kpọmkwem ika. Maka ọtụtụ ndị ọrụ, iji ekweisi dị mkpa na ụbọchị ha kwa ụbọchị, ya mere, ụfọdụ nke ụfọdụ ewerewo bụ iji wụnye MacOS 10.12.4 site na ncha, mana n'agbanyeghị nsogbu ahụ ka dị. Otú ọ dị, ịlaghachi na nsụgharị gara aga, MacOS 10.12.3 ma ọ bụ nsụgharị ndị mbụ, a na-edozi nsogbu ahụ ozugbo.
Ọ bụ ezie na ọ naghị eme na otu akara, ndị ọrụ ndị ọzọ na-akọ na ọrụ na ekweisi ha anaghị ebelata ozugbo emelitere ha na sistemụ arụmọrụ Macs kachasị ọhụrụ.
Ihe niile yiri ka ọ na-egosi na, nsogbu nwere ike metụtara ọhụrụ version audio ọkwọ ụgbọala. Ọ bụrụ otu a, Apple ga na-arụ ọrụ na nwelite mberede, nke na-enye ohere iji ekweisi emetụtara emetụtacha.
Ọhụrụ MacOS 10.12.4, gosipụtara na Mọnde gara aga. Ihe omuma nke kachasi nma bu uzo N'abalị Ntugharị. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na anyị nwere ọnọdụ arụ ọrụ na Mac anyị, ọnọdụ ihu igwe ga-adị ọkụ karị, ka mgbede na-aga n'ihu.
Na mgbakwunye na ụdị ahụhụ ndị na-ahụkarị na nchekwa. Versiondị ahụ gụnyere: API ọhụrụ maka PDFKit Siri na-enye anyị nsonaazụ Cricket, na nhọrọ ndị ọzọ nchịkọta iCloud.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Usersfọdụ ọrụ na-akọ nsogbu na USB ekweisi mgbe emelite ka MacOS 10.12.4
Afraidjọ na-atụ m na ọ bụghị naanị ekweisi na-akpata nsogbu. N'okwu m, mgbe ị na-emelite mbipute 10.12.4, njikọ ethernet akwụsịla ịrụ ọrụ (Wi-Fi na-aga n'ihu na-arụ ọrụ), na mgbakwunye, n'ọtụtụ oge sistemu ahụ kwụgidere na ụbọchị na oge na-aga n'ihu na-ahazi.
Gini mere m ji emelite TT achọrọ m egwu iji rụọ ọrụ: C.
Nlekọta Nchọgharị na-enye anyị ohere ijikwa ohere nke ihe nchọgharị anyị nwere
Guru batrị, enwere obere oge na Mac App Store